ခင်ဗျား ပလာတာ ရိုက်တတ်လားဗျ။
ဘယ်နှယ့်…. ဒီလူ…. ဘာတွေ လာမေးနေတာတုံး…. ဆိုပြီးတွေးမိတယ်ဟုတ်….
ခင်ဗျား ပလာတာ ကောင်းကောင်း ရိုက်တတ်ရင် စင်္ကာပူမှာ Spass နဲ့ အလုပ်လုပ်လို့ ရပြီဗျ…
Spass ကို ရိုးရိုး လျှောက်ပေးမှာ မဟုတ်ဘူးနော်…. အမြန်ကြီးတောင် လျှောက်ပေးဦးမှာ…
အမယ်…. ပလာတာရိုက်တယ် ဆိုလို့ ပေါ့သေးသေး အောက်မေ့နေတယ်….
တက္ကသိုလ် တစ်ခုခုက ဘွဲ့တစ်ခုခု ရရဦးမှာဗျ… နော…. တော်သေးတာပေါ့… B.A (Platar) တို့ B.Sc (Platar) တို့ မတောင်းတာ… နောက်ကံကောင်းတာ တစ်ခုက IELTS 5.5 တို့…. TOEFL ၅၅၀ တို့ မတောင်းတာ ကျေးဇူးတင်ရမယ်ဗျ… နော…
ပလာတာ ရိုက်တတ်ရင် စင်္ကာပူမှာ Spass နဲ့ အလုပ်လုပ်လို့ ရတယ်တဲ့ လို့ လျှောက်လည်း မပြောနဲ့ဦး… တော်ကြာနေ… ရန်ကုန်က TECH တို့… RV တို့မှာ… ပလာတာ အမြန်ရိုက်နည်း လုပ်ငန်းခွင်ဝင် တစ်လပြတ် သင်တန်းတွေ ဘာတွေ လိုက်ဖွင့်နေဦးမယ်… :)
Here is my homepage - sugartree.org.uk
I get your associate hyperlink on your host? I desire my web site
Feel free to visit my web blog: launchpad16.com